युरोकप बिजेता टिमलाई कसले दिन्छ ट्रफी ? :: NepalPlus
युरोकप बिजेता टिमलाई कसले दिन्छ ट्रफी ?
नेपालप्लस संवाददाता / बेलायत२०७८ असार २७ गते १७:०७
सन् १९६६ विश्व कप फाइनल र यूरो १९९६ फाइनलमा बिजेतालाइ ट्रफी रानी एलिजाबेथ द्वितीयले प्रस्तुत गरेकि थिईन् । तर यो वर्ष रानीले दिने छैनन् । किनभने बेलायतकी महारानीलेनै ट्रफी दिन आफ्नै तर्फबाट स्विकार नगरेको बताइन्छ ।
युनियन अफ युरोपियन फुटबल एसोसिएसन (युफा) यसको प्रमुख प्रतिस्पर्धाको अन्तिम पाँच संस्करणका लागि यसका अध्यक्षले ईटाली र बेलायतबिच हुने खेलमा विजयी कप्तानलाई ट्रफी हस्तान्तरण गर्ने पुष्टि गरेको छ ।
यूरोपीय फुटबलको नियामक निकायले अन्तिम दुई प्रमुख फाइनललाई वेम्बलेमा आयोजना गरिएको भन्दा फरक प्रस्तुतीका साथ स्टेडियमको प्रतिष्ठित बाल्कोनीमा नहुने पुष्टि गरेको थियो ।
सन् १९६६ विश्व कप र यूरो १९९६ फाइनलमा दुबै टोलीले रानीबाट पदक र ट्रफी उठाउन प्रख्यात वेम्ब्ली चरणहरू पार गर्नुपरेको थियो ।
तर कोरेनाभाइरस संकट सुरु भएदेखि स्टेडियममा सबै प्रमुख फाइनलहरू जस्तै आज आइतवारको म्याच-पोस्ट प्रस्तुती खेल मैदानमै हुने छ ।
बेलायतको फुटबल संघका अध्यक्ष राजकुमार विलियम हुन् । उनी सन् २००६ बाट मनोनित थिए । उनले समारोहमा भाग लिनेछन् र बेलायतका खेलाडीहरूलाई बधाई दिन वा सान्त्वना दिने गरेका छन् । ट्रफी हस्तान्तरण गर्ने सम्मान भने यूफाका अध्यक्ष अलेक्जेन्डर सेफेरिनलाई दिइने छ।
तर विलियम आज आइतवारको खेलमा उनकी श्रीमतीको साथ आउनेछन् वा छैनन् भन्ने अझै स्पष्ठ छैन । किनभने उनी कोविड १९ सकारात्मक परीक्षण गर्ने कसैसँग नजिकको सम्पर्कमा आएपछि क्वारेन्टाईनमा छिन्।
आज हुने खेलमा महारानी भने संलग्न हुने छैनन् । र रानी सन् २०१४ मा ग्लास्गोमा भएको कमनवेल्थ खेलको उद्घाटनपछि अन्य मुख्य खेलहरुमा सहभागि भएकिपनि छैनन् ।
बेलायतले आज आ इतवारको खेलमा बिजय हाँसिल गरेमा बेलायतको दरबारले आफ्ना सबै खेलाडीहरुलाई निजि समारोहमा आमन्त्रित गर्ने बेलायती अखबारहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
योजनाहरूको अन्तिम निर्णय भैसकेको त छैन । तर सन् १९६६ मा विश्वकप जिते पछि उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि आज आइतवार हात लागेमा बेलायतका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू ह्यारी केन र उनका साथीहरुलाई निम्त्याउने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बुधवार सेमीफाइनलमा डेनमार्कसितको जितमा भाग लिएका थिए । राजकुमार विलियम पनि शाहि स्थान (रोयल बक्स) मा टुर्नामेन्ट चल्दा पदासिन थिए ।